Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ:အကောင်းဆုံး Patreon ညမ်းဂိမ်း!
ပေါ်လာဖို့အတွက် Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲနေ့!
တင်ဆောင်လာရှိပါတယ်–ရှာဖွေနေအပေါ်သင်၏လက်ကိုရဖို့အချို့ကြယ်ပြာ။ ကောင်းစွာ၊ကျွန်တော်ပဲကူညီနိုင်! ကြည့်ရှု၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကမပါဘူးထြက္လာဘာမှမပြည်တွင်း၊ငါတို့မူကား၊သေချာသိဖို့ဘယ်လိုအတူထိတွေ့ရမှအကောင်းဆုံးဂိမ်းအုပ္ဆုိင္လောကအတွက်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အတူတကွတင်ရာအရပ်ကဲ့သို့ Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက်။ အယူအဆဒီမှာအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့:အကြှနျုပျတို့သညျသင်ပေးသုံးစွဲဖို့အလွန်အကောင်းဆုံး XXX ခေါင်းစဉ်ကနေဖြောင့် Patreon။ အများကြီးဒီဂိမ်းအမိုးမ်ားမွ paywall အနက်အဓိပ္ပာယ်၊သင်ရယူချင်တယ်ဆိုရင်သင်ရမည်သည့်အရေးယူ–တော်တော်လေးကြမ်းတမ်းသောပစ္စည်းပစ္စယ!, ကျနော်တို့လည်းကြားရ၏ထိတ်လန့်ပုံပြင်များအချို့ကိုအုပ္ဆုိင္ယူလ၊လျှင်မနှစ်မှပေးထေးနှင့်မွမ်းနေစဉ်သူတို့ရိတ်အစည်း၏ငွေမှ$၅-၁၀ ဒါန္းႏွလုပ္–စက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သောပရိကံ။ ကောင်းစွာ၊အခြေခံအကြောင်းရင်းမှာ Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအကြောင်းအဲဒီအစားသင်၏အယူကြောင်း၊ကျွန်တော်ထိုသို့ပြုသင်တို့၏ကိုယ်! ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ကြေညာကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းသည်အရေအတွက်တစ်နေရာအွန်လိုင်းလက်ျာဘက်ယခုရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင် Patreon ညမ်း။ ကျွန်တော်တို့ကိုမယုံကြည်ပါနဲ့? ကောင်းပြီ၊နိမိတ်လက္ခဏာကိုဖွင့်နှင့်ကိုယ်အဘို့ကိုတွေ့မြင်!, သငျသညျမှာအံ့သြဖို့ယူအဆင့်များအမှုအရာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ပူအရည်ရွှမ်းနှင့်အင်း–လိမ့်မယ်ရဲ့ဝန်အချိန်အတွက်မှာအားလုံး။ ပိုမိုလေ့လာဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်အောက်တွင်ဆင်း၊သို့မဟုတ်ရိုးရိုးသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးနှင့်ယခုသုံးစွဲျဖင့္ယံ Patreon ဂိမ်းများ–ဒါမင်းအတွက်အေးမြ!
ကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးသွင်းထားအားထုတ်မှုသို့သေချာသွားရောက်ကြည့်ရှုသူအလူတွေက Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲရသူတို့ဘာလိုချင်:အလွန်ကြီးစွာသော XXX။ ဤသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကြွလာ၊တစ်ဦးကုန်ကျစရိတ်မှာအများကြီးများအတွက်ခေါင်းစဉ်၊အဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်ငါသည်ဒါပျော်ပါတယ်အခွေကိုသင်တက်လက်မှတ်ထိုးမှာတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ ဟုတ်ကဲ့၊ကျွန်တော်သိသည်–သင်ထင်နေတဲ့အတွက်ပေးဆောင်ရနိုင်ရန်ဤမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ညှိနှိုင်းအထူးအခွန်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေပေးအယူနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောအုပ္ဆုိင္ထွက်ရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပေးရန်အခမဲ့ဂိမ်းနှင့်ခွင့်ပြုဖို့သူတို့ကိုအမြတ်အစွန်းရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်။, ကျနော်တို့အယူအပေါ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးနှင့်အင်း–ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဒီပလက်ဖောင်း၊ထည့်ရပါလိမ့်မယ်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအထေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ ကိုယ့်အသိကဘယ်တော့မှမနှင့်အတူလာမှလိုအပ်ချက်ဖို့သင်ချောင်းဆိုးငြ:ဒါဟာရဲ့ ၁၀၀%အခမဲ့မည်သူမဆိုများအတွက်ပူးပေါင်းထိုသို့အစဉ်အမြဲဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ဖို့အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားကမ္ဘာ့ဖလားသင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးတာဝန်ခံပြည်သူ့စေနိုင်ရန်အတွက်အခေါအတွက်ဤလုပ်ငန်း။ သေချာမှုရှိစေခြင်းငှါ၊အနည်းငယ် teething ကိစ္စရပ်များ၊ဒါပေမယ့်အစွန်းရောက်များ၏မရှိခြင်းညမ်းဂိမ်းများထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်၊ကျနော်တို့ကြောင်းစဉ်းစား၏အထူးချွန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အဘို့အသွား။, အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်သော Patreon အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းမကြာမီတက်ပေါက်အပေါ်ထိပ်တန်းစာရင်း၏ရှိသမျှဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဂိမ်းဆန်းစစ်အမြန်ဆုံး–ကောင်းပြီ၊ဇော၊ဒါပေမယ့်သင်ရရှိပါသည်ပြီးဖို့ရည်ရွယ်ထားမြင့်၊မှန်သော?
အစိတ်အပိုင်းစေသည်ဘယ်အရာ၏Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲကွဲပြားခြားနားကြောင်းကျွန်တော်ကိုမကျင့်ကအမှန်တကယ်ဖန်တီးမည်သည့်ဂိမ်းများကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်–အနည်းဆုံးမသေး။ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာကျွန်တော်တို့ပေးဆောင်သောသူကိုအခြားသူများပြီးသားဖန်တီးခြင်း(သို့မဟုတ်ဖန်တီးဂိမ်းများ)များကိုသူတို့အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်း။ ဒါဟာဦးဝင်း-ဝင်းအခြေအနေ၊အဆုံးအသုံးပြုသူတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အသီးအသီးထုတ်လုပ်သူမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိသွားတဲ့အစည်း၏ငွေကြေးကသူတို့သုံးစွဲဖို့ဆက်လက်။, ကျွန်ုပ်တို့သည်အစပိုင်းတွင်ရည်ရွယ်ဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းအပေါ် Patreon နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်နေ့မှာကျနော်တို့လိမ့်မည်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သေးသောဤအလားအလာအခြားရွေးချယ်စရာသောကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပေးစေခြင်းငှါအလျင်အမြန်တိုးချဲ့ဖို့နှစ်ဦးစလုံးထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအား၏အမျိုးမျိုးသောလိင်ဂိမ်းများအပေါ် Patreon။ ယခုသင်အံ့သြစေခြင်းငှါ:အဘယျသို့ဗားရှင်းကြရ၏။ တိုတောင်းသောအဖြေ:အပြည့်အဝသောသူ၊ပြီးတော့အချို့! ဝီ၊Patreon စြဲႏိုင္ပါသည္တခါတရံဖြတ်ပြီးလာကိစ္စရပ်အချို့အခင်းအကျင်းအသစ်များအရပိတ်ပင်–သင်ျ၊ဥပမာအားဖြင့်။, ဘာမျှလောက်ကြီးစွာသောကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းကိုအနိုင်ကစားဒါတွေအားလုံးဂိမ်းအဖြစ်သူတို့ရည်ရွယ်ပါသည်ခဲ့ကြသည်အစား–အပြည့်အဝအရေးယူနှင့်အတူအရာအားလုံးကိုျမႇဳပ္ႏရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်။ အမွတ္ဆင္ဆာ၊အမွတ္သောက်သုံး:ကိုယ့်အပြည့်အဝဂိမ်းအတွေ့အကြုံကြားမှဖြောင့်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို။ အိုး၊နှင့်အခြားအရာ–လက်လှမ်းမီဒီမတူဘဲဘာမှမအစဉ်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်!
အများကြီးအ Patreon ဂိမ်းများသင်ထွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရှိပြီဖြစ်ဒေါင်းလုပ်:ရိုးရှင်းသောအကြောင်းပြချက်ကြောင်းဖြစ်ခြင်း Patreon ကိုယ်တိုင်ကမည်မဟုတ်ရှင်ညမ်းဂိမ်းအပေါ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာများအတွက်သင်အားကစားတစ်ခုအပေါ်နေ့အခြေခံ။ သူတို့ရဲ့တိုမျက်မှောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုး:ကျနော်တို့ဗိုလ်ခြေတို့ကိုသင်တို့အဘို့၊ဒါပေမယ့်မအဖြစ်ဒေါင်းလုပ်–တစ်ဦးအဖြစ်တိုက်ရိုက်ရာက္ဇာဂိမ်း။ မှန်တယ်:အတိုင်းသင်သုံးစွဲ Chrome၊ရှုသို့မဟုတ်အဝတ်အစား၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကစားအရာအားလုံးကိုရှိသည်။, ဒီစကိုဆိုလိုတယ်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပျော်မွေ့နိုင်အ Patreon ခေါင်းစဉ်ပေမယ့်၊ကျွန်တော်ဝန်ခံရမယ်–သူတို့အများစုမဟုတ်အံဝင်ခွင်သို့မျက်နှာမိုဘိုင်းဂိမ်းကစား၊ဒါကြောင့်ပုံများနှင့်ညွှန်းစေခြင်းငှါအနည်းငယ်ခက်ခဲ။ တဦးတည်း၏အနာဂတ်အစီအစဉ်များကျနော်တို့အတူတူထားေစုဆောင်းမိုဘိုင်းဖော်ရွေလိင်ဂိမ်းများကနေ Patreon ပေး၊သို့သော်အကြောင်းတစ်ခုခုရဲ့လမ်းပိတ်တော့အနာဂတ်ဆီသို့၊ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အသက်ရှုကိုင်နေတယ်ဆိုရင်တစ်ဦးအပေါ် iPhone ပေါ်မှာအန္း–မသင်မပူဇော်မယ့်အနောက်မျိုးဆက်ညမ်းဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံ!
Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအစည်းများ၏အရာ၌ပိုက်လိုင်းအထွက်တိုးပွါးလိမ့်မည်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဖြန်ဖြေကြားမျိုးမျိုးသောဂိမ်းထုတ်လုပ်သူနှင့်သောသူတို့လိုထုတ်ကုန်များ:အဆိုပါအများဆုံးအရေးကြီးသောအကြံပြုချက်များအတွက်ဂိမ်းထည့်သွင်းခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စ။ ကျနော်တို့လက်ရှိတွင် ၄၀ ဖြန့်ချိ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဖြစ်စေချင်တယ်ဒီ ၆၀ အတွင်းအနောက်လအနည်းငယ်။ ကြောင်းသတိပြုမိဖြစ်ကျေးဇူးပြုကျနော်တို့လက်ကောက်တိုင်းခေါင်းစဉ်နှင့်မဆင်းရဲကြုံလျှင်သင့်ရဲ့ဂိမ်းယူတာပဲ၊မတရားမႈကိုဒီမှာပါစာရင်းသွင်း။ အဖွဲ့အဖက်ဖက်များ၏သမာဓိကိုပရိသတ်၏တောင်းဆိုချက်ကိုမည်မဟုတ်၊သူတို့ကိုအမှိုက်အခါသူတို့အမဲလိုက်အဘို့ဘဏ္ဍာကို။
ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေ–အရာအားလုံးရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စား? သင်ယူချင်သင့်ရဲ့ညမ်းဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံလာမယ့်အတန်း? သင့်ရဲ့အခမဲ့အကောင့်နဲ့စတင်ရန်၊အဲဒီအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်ကတစ်သက်တာအဖြစ်အပျက်သင်လုံးဝအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမပါဘဲ! စောင့်ရှောက်မှုယူ၊ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်သင်တန်း၏၊မင်္ဂလာ fapping အတိပေး! ျငိမ္းခ်မ္းေရး။